Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Amachibidoro njem na Hawaii ọnwa abụọ ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mmachibido njem njem Hawaii
Nke a na -aghọ mantra ọkọlọtọ site na Gọvanọ Hawaii David Ige maka ndị njem na -eche echiche ịbịa n'agwaetiti ahụ maka ezumike - Biko gbuo atụmatụ njem gị.
Dị ka Gọvanọ Hawaii taa, ụkpụrụ njem ga -anọrịrị ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ ọzọ.
Hawaii na-agbasi mgba oke ọnụọgụ COVID-19 n'ihe banyere ikpe na ọnwụ ọhụrụ n'ihi ụdị Delta na-efe efe nke ukwuu.
Maka ndị ka na-abịa Hawaii, ha ga-egosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nsonaazụ COVID na-adịghị mma n'ime awa 72 ha rutere Hawaii ma ọ bụ chee iche iche ụbọchị iri.
Gọvanọ na -enwe ọgbakọ mkparịta ụka kwa izu na Aloha Steeti, na izu ole na ole gara aga, arịrịọ ya bụ otu - ịrịọ ndị njem nleta ka ha chere ruo mgbe emesịrị ịga leta Hawaii.
Ugbu a Hawaii nwere iwu mberede ka edozie etu esi eme njem mgbe ị na -aga Hawaii, na kwa Gọvanọ taa, ụkpụrụ ndị ahụ ga -anọrịrị ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ ọzọ.
Hawaii na-agbasi mgba oke ọnụọgụ COVID-19 n'ihe gbasara ikpe na ọnwụ ọhụrụ, ihe niile bụ n'ihi ụdị Delta na-efe efe nke ukwuu. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ọnwụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ n'otu ụbọchị. Ụlọ olulu Honolulu etinyela ihe nju oyi atọ na ihe onwunwe iji nabata ọnụ ọgụgụ dị elu nke a na -anata yana ịnwe ndị gafere na COVID, nke bụ ugbu a ọtụtụ n'ime ha.
Gọvanọ Ige kọwara na nkezi ụbọchị asaa nke ikpe ọhụrụ kwa ụbọchị ka dị elu karịa 300. Ọnụọgụ ndị ahụ dị egwu karịa mgbe COVID-19 pụtara mbụ. N'otu oge n'ọnwa Ọgọst nke afọ a, enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe 900 edere na Hawaii n'otu ụbọchị.
Kemgbe ahụ, Hawaii achịala ọnụ ọgụgụ mmadụ nwere ike ịgbakọta n'otu ebe yana mmadụ ole nwere ike iri nri n'otu ụlọ ọrụ n'otu oge. Maka ndị njem, nke a pụtara ogologo ahịrị n'ụlọ nri, na ọtụtụ ebe na -enye nri na -eme ya naanị maka iburu.
Gọvanọ Lieutenant Hawaii Josh Green, onye bụkwa dọkịta ER, ji anya ugo na -ele ọnụọgụ ụlọ ọgwụ. Ọ rụtụrụ aka ngwa ngwa na ọtụtụ n'ime ndị a na -elekọta ụlọ ọgwụ ugbu a dị ka ndị ọrịa COVID, bụ ndị na -enweghị ọgwụ mgbochi. Ihe omuma a gosiputara na ihe ruru 90% nke ndị chọrọ ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ maka COVID enwetaghị ọgwụ mgbochi ọ bụla, na pasent ahụ ka na-agbanwe agbanwe kwa ụbọchị.
Ugbu a, iyi nkpuchi bụ iwu na oghere ọha, yana ịbanye n'ụlọ nri ma ọ bụ maka iri nri ma ọ bụ ịtụtụkọta ihe, mmadụ ga -egosi kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ime nke a.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Hawaii na -abịaru ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 70% nke a na -elebu anya iji nweta echiche igwe - nke dị ugbu a na 68% - Gọvanọ ahụghịzi ịgafe ọnụ ụzọ a dị ka akara maka ịtọghe ihe mgbochi. Ụdị Delta dị iche iche na -efe efe nke ukwuu na -eme na ebumnobi dị mkpa ugbu a adịghị mkpa.
Nchegbu kasịnụ bụ maka ndị ọrụ ahụike na ụlọ ọgwụ ndị agbatịkwuru karịa ọnọdụ nkịtị na -abanye n'afọ nke abụọ. Ndị ọrụ na -arụbiga ọrụ ókè ma na -enyocha ọnụọgụ nke ndị ọrịa COVID mgbe niile ka ụlọ ọgwụ wee nwee ike ịnabata ụdị ndị ọrịa ọzọ chọrọ nlekọta ahụike.
Maka ndị ka kpebiri ịga Hawaii, ha ga-enwerịrị ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nsonaazụ COVID na-adịghị mma n'ime awa 72 mgbe ha rutere Hawaii ma ọ bụ na a ga-atụpụ iche ụbọchị iri.
Argentina, Colombia, Namibia na Peru ekwesịghị inwe ...
Oge ski ọhụrụ nke Europe na-adabere na nguzozi
Swoop: Ụgbọ elu si Winnipeg gaa Puerto Vallarta...
Egwuregwu ndị nwoke ma ọ bụ nwanyị 2026: Valencia Spain nwetara nnukwu ihe
Tokyo welitere mmachi ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka COVID-19 ọhụrụ…
Rochelle Shankle kwuru ekwu, sị:
October 4, 2021 na 18: 34
"Echiche echiche igwe" huh? Nke a ọ bụ mgbada Freudian? Bịa ndị editọ, anyị nwere ike ime nke ọma.
Cheryl ekwu, sị:
October 4, 2021 na 06: 11
Abụ m onye bi na Hawaii na m maara, ndị ahịa na -anakọta iwu site n'ụlọ nri ekwesịghị igosi kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nsonaazụ ule adịghị mma.
Nke ahụ metụtara naanị iri nri ndị ọbịa.
M na -arụ ọrụ n'ụlọ nri ebe m na -ere nri, ana m arụkwa nri na nnyefe nri nwa oge.